Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny Kia Niro vaovao dia manao voalohany eran-tany
Ny Kia Corporation dia nanambara voalohany ny Niro vaovao androany tamin'ny 2021 Seoul Mobility Show, izay mikendry ny hahatonga ny fivezivezena maharitra ho an'ny rehetra.
Ny Niro vaovao rehetra dia ahitana ny fanoloran-tenan'i Kia amin'ny fananganana hoavy maharitra kokoa. Amin'ny maha-ampahany manan-danja amin'ny zotram-piarahamonina mitombo an'i Kia, ny maodely vaovao dia hanintona ireo filan'ny mpanjifa miahy ny faharetana.
Namboarina tanteraka hatrany am-boalohany, ny Niro vaovao rehetra dia novolavolaina teo ambanin'ny filozofian'ny orinasa Opposites United, manatanteraka ny etos 'Joy for Reason'. Mitaky aingam-panahy avy amin'ny natiora tsy amin'ny famolavolana ihany fa amin'ny fisafidianana loko, akora ary famaranana ihany koa mba hisian'ny fifandanjana tonga lafatra eo amin'ny fomba fiasa tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainana sy ny fomba fijery mitodika amin'ny ho avy.
Ny fiantraikany mahery vaika amin'ny foto-kevitra Habaniro 2019 dia miharihary amin'ny endrika ivelany an'i Niro miaraka amin'ny endrika crossover kanto sy sahisahy ary vatana roa misy feo avo lenta. Ny andry midadasika ao aoriana dia manatsara ny fikorianan'ny rivotra mba hanatsarana ny aerodynamic ary mifangaro amin'ny jiro aoriana miendrika boomerang.
Niova ho an'ny Niro vaovao ny sonian'i Kia ary manomboka eo amin'ny sarony, ka hatrany amin'ny fender masiaka etsy ambany. Ny endrika anoloana ankehitriny dia vita miaraka amin'ny LED DRL (jiro mandeha antoandro) manaitra izay miteraka fahatokisana sy fijery manaitra eny an-dalana.